के नेटफ्लिक्स राम्रो मान विश्लेषकहरूले हामीलाई भन्छन्? | अर्थव्यवस्था वित्त
निस्सन्देह, सूचीबद्ध नेटफ्लिक्स एक मान हो जुन गत बर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खेल दिएको छ। अब तिनीहरूको प्रश्न यो हो कि यो परिदृश्य २०२० मा दोहोरिने छ। यो याद राख्नु पर्छ कि नेटफ्लिक्स, इंक एक अमेरिकी मनोरन्जन कम्पनी हो जसको मुख्य सेवा भनेको अनलाइन प्लेटफर्म वा सेवाको माध्यमबाट अडियोभिजुअल सामग्रीको वितरण हो। स्ट्रिमि V VOD। यद्यपि यो संयुक्त राज्यको इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध छ र यसको लागि यसको संचालन राष्ट्रिय वित्तीय बजारको तुलनामा केही उच्च कमिसनको साथ महँगो हुनेछ।
जे भए पनि शेयर बजारका केही विश्लेषकहरू श doubt्का गर्छन् कि नेटफ्लिक्स सार्वजनिक रूपमा जाने निर्णय गरेदेखि नै ठूलो सनसनीपूर्ण हो। उनीहरूको मूल्यको मूल्या in्कनमा सराहनाको साथ shot%% सम्ममा शूट गरिएको छ, इक्विटी बजारहरूले यस अवधिमा प्रदान गरेको सबै भन्दा उच्च फिर्ता मध्ये एक हो। यस दृष्टिकोणबाट यो हामीलाई केही जटिल देखिन्छ कि यसले अबदेखि उही तीव्रताका साथ व्यवहार गर्न सक्छ। यस अर्थमा, भविष्यमा तपाईंको सेयरहरूको खरीददारहरू तिनीहरूको उपलब्ध पूंजीलाई लाभदायक बनाउनको लागि ढिला हुन सक्दछन्।
नेटफ्लिक्स एक कम्पनी हो जुन संयुक्त राज्यको इक्विटी बजारमा धेरै छोटो समयको लागि सूचीबद्ध गरिएको छ र यस अर्थमा यो साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको लागि धेरै सकारात्मक विकास भएको छ। यो कायम छ कि एक बिंदु मा, र एक निश्चित तरीकाले छ, पृष्ठभूमि मा एक धेरै स्पष्ट upward प्रवृत्ति, यद्यपि यसको मूल्य मा कमजोरी को पहिलो संकेत संग। यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि अल्पसंख्यकहरूको एक राम्रो हिस्साले अहिलेसम्म जम्मा भएका पूँजी नाफाको आनन्द लिन आफ्नो स्थान छोड्ने निर्णय गरेको छ। अर्को धेरै फरक कुरा के हो जुन तपाईं अर्को केही महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ।
1 नेटफ्लिक्स लाभमा बृद्धि संग
2 तपाईं गुणस्तरीय सामग्रीमा लगानी गर्नुहुनेछ
3 तिनीहरूको पदमा प्रवेश को पक्षमा
4 मूल्य बिरूद्ध स्थितिहरू
5 उनीहरूको मुल्यहरुमा ठूलो भिन्नता
नेटफ्लिक्स लाभमा बृद्धि संग
यस कम्पनीको एक शक्तिको शुद्ध लाभ हो जुन यसले आफ्नो आय विवरणमा देखाउँदछ। कुल योगदान गरेर 1.866 मिलियन डलर गत बर्ष, जुन अघिल्लो वर्षको समान अवधिको तुलनामा% of% को वृद्धि प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले राजस्व र ग्राहक वृद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गर्‍यो, यो एक कारक हो जुन अमेरिकी इक्विटी बजारमा यसको अत्यन्त ठाडो वृद्धिमा आधारित छ। २०१ 54 मा यसले विश्वव्यापी around. 2019 मिलियन नयाँ ग्राहकहरू थपेको छ।
आउने महिनाका सम्भावनाहरू पनि सकारात्मक छन्, यद्यपि 2019 मा विकसित तीव्रता अन्तर्गत होईन। यस तथ्यले पक्कै पनि अमेरिकी शेयर बजारमा यसको विकासलाई असर गर्न सक्छ, तर यो बढ्न जारी रहन सक्छ, जे भए पनि यसको मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एक हो। विशेष गरी स्टक बजार व्यायाममा जुन अमेरिकी शेयर बजारको लागि लाग्न नसकिने अप्रत्याशित उकास पछि केहि गाह्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ। किनकि कुनै पनि समयमा सुधारहरू आइपुग्नुपर्नेछ र हुनसक्छ तिनीहरू वित्तीय विश्लेषकहरू द्वारा तालिका भन्दा अघि नै हुनेछन्।
तपाईं गुणस्तरीय सामग्रीमा लगानी गर्नुहुनेछ
अवश्य लेखा आंकड़े राम्रो हो, वा बरु उत्कृष्ट। तर पनि यो बढ्न जारी रहन सक्छ भने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं राम्रो सामग्री मा लगानी गर्न जारी छ र साथै तपाईं मूल्य को मुद्दा समीक्षा। एक विचाराधिन विषयको रूपमा जुन यसमा विश्वभरिका प्रयोगकर्ताहरू छन् र जुन शेयर बजारमा यसको मूल्याation्कन अब देखि निर्भर गर्दछ। यसको क्षेत्र भित्र कुनै स्पष्ट प्रतिस्पर्धाको साथ र यो तथ्यले आउँदो वर्षहरु को लागी यसको व्यावसायिक संभावनाहरु लाई समर्थन गर्दछ। यद्यपि हामीले पहिले खुलासा गरेका सीमितताहरूलाई ध्यानमा राख्दै त्यो मूल्यको कमजोर अ of्कहरू मध्ये एक हो र राम्रो समयको बावजुद यसले स्टक मार्केटमा आफ्नो खरीद स्थान खोल्ने सानो र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई दिएको छ।
अर्कोतर्फ, हामीले यो पनि जोड दिनुपर्दछ कि नेटफ्लिक्स एक कम्पनी हो कि एक छ ग्राहकहरूको उच्च सम्भावित स्तर। त्यसबखत तिनीहरू मध्ये धेरै उच्च खरीद शक्ति भएका युवा व्यक्ति हुन् र जसले यस सामाजिक मिडियाको सामग्रीहरू हेर्न सम्झौता गरेका छन्। सामान्य टेलिभिजन च्यानलहरूको हानिलाई जुन यस अर्थमा दण्डित हुन सक्छ र उनीहरूको मूल्यहरूको कन्फिगरेशनमा कमी आएको छ, जुन शेयर बजारको अन्तिम सत्रहरूमा देख्न सकिन्छ। हालका महिनाहरूमा सबैभन्दा खराब टेक्निकल पक्षको साथ क्षेत्रहरू मध्ये एक हुनु। एक लक्षित मूल्यको साथ जुन सब भन्दा सान्दर्भिक वित्तीय विश्लेषकहरूले घटाएको छ।
तिनीहरूको पदमा प्रवेश को पक्षमा
हो, हालसालैका महिनाहरूमा विकसित भएका सुधारहरूको बावजुद नेटफ्लिक्ससँग एक धेरै राम्रो टेक्निकल पक्ष छ। जहाँ यो सम्भव छ कि यो अबबाट अधिक महत्वाकांक्षी स्तरमा पुगेको कारणले गर्दा खरीद दबाब लगानीकर्ताहरूले व्यायाम गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, यो बिर्सनु हुँदैन कि यो मान स्पष्ट रूपमा तेजीमा रहेको छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको शेयर बजारमा सब भन्दा सान्दर्भिक। अन्य क्षेत्रहरू माथि र त्यो कुनै पनि केसमा तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि यो अझै यात्रा गरीरहेको छ, यद्यपि अहिलेको त्यति तीव्रताका साथ छैन।
यो पनि भन्न सकिन्छ कि यस अमेरिकी कम्पनीले विश्वभर बाट प्रयोगकर्ताहरुको राम्रो हिस्साको लागि आफैलाई खोलेको छ र यो त्यस्तो पक्ष हो जसले यसलाई धेरै सुझाव दिन्छ ताकि यो वित्तीय बजारमा यसको मूल्यको आधारमा बढ्दो छ। यस समयमा, स्थान लिने लगानीकर्ताहरू यसका साथ जारी रहन सक्ने सम्भावनाको कारण यसले अधिक महत्वाकांक्षी तहमा जान सक्छ। जब तपाईं तिनीहरूको स्थानहरूबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईं लगानीको लागि पूंजी उपलब्ध गराउनको लागि मूल्य कटौतीको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अधिक आकर्षक मूल्यको साथ र यसैले उच्च फिर्ताको उत्पत्ति गर्ने राम्रो मौका छ।
मूल्य बिरूद्ध स्थितिहरू
अर्कोतर्फ, र अधिक नकारात्मक तत्वको रूपमा तथ्य यो छ कि यो मूल्य धेरै बढेको छ किनकि यो इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। एक धेरै ठाडो वृद्धि जुन कुनै पनि समयमा रोक्न सक्दछ, वा कम्तिमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधारको विकास गर्दैछ जुन यसको मूल्य यस क्षणमा भन्दा कम लिन सक्दछ। नेटफ्लिक्सले अहिले प्रस्तुत गर्ने सब भन्दा सान्दर्भिक जोखिमहरू मध्ये एक हुनु र यसले उनीहरूको स्थानमा निस्कनलाई अब वास्तविकता हुन प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यद्यपि यो धेरै गहनता संग मानिएको छैन।
थप रूपमा, यो एक मूल्य हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा परिवर्तनप्रति धेरै संवेदनशील हुन सक्छ। यस दृष्टिकोणबाट यसलाई चक्रीय मान वा उस्तै कुरा मान्न सकिन्छ जुन आर्थिक विस्तारको अवधिमा यसको उत्कृष्ट परिणाम हो र यसको विपरीत मन्दीमा पनि यसले यसको मूल्यमा महत्त्वपूर्ण गिरावट उत्पन्न गर्दछ। यो अन्तिम कारणको लागि, तपाइँ हुनुपर्दछ समर्थन गर्न धेरै ध्यान दिनुहोस् कि अब भन्दा बढी हुन सक्छ र केहि मामलाहरु मा कम्पनी मा अधिक जटिल अवस्थाबाट बच्न को लागी आफ्नो स्थिति त्याग्न सेवा हुनेछ। किनभने साना र मध्यम लगानीकर्ताहरू राम्ररी जान्दछन्, केहि पनि सदाका लागि बढ्दैन, शेयर बजारको जटिल जटिल संसारमा धेरै कम।
उनीहरूको मुल्यहरुमा ठूलो भिन्नता
अर्कोतर्फ, यो तथ्यलाई जोड दिन पनि आवश्यक छ कि मानहरूको यस वर्ग धेरै हो सञ्चालन गर्न जटिल उनीहरूको मूल्यहरूको कन्फर्मेसनमा प्रस्तुत गर्दछ कि ठूलो अस्थिरता को कारण। यसले साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई इक्विटी बजारमा हतार गर्न र अलि बढी गाह्रो बनाउँदछ। जे भए पनि, यो बजार मूल्य हो जुन यस पक्षको पक्षमा रहेको छ कि यो पार्टी अझै पनि संयुक्त राज्यको इक्विटी बजारमा स्थापना भएको देखिन्छ जुन यो सोशल मिडिया कम्पनीले संचालन गरेको छ। सुधार हुनसक्दछ कि हुन सक्छ र वास्तव मा यो वित्तीय बजार मा भएको छ।
तथ्या With्कहरूको साथ जुन उनीहरूलाई राम्रो मानिन्छ। जे होस्, हामीले सुरूमा भनेजैं, ती बढिरहनु आवश्यक छ, दुबै व्यवसायको नयाँ लाइनहरूमा र आफ्नै अडियोभिजुअल सामग्रीमा। तर सूचीबद्ध क्षेत्रहरु भन्दा राम्रो स्थितिमा जुन यस क्षेत्र भित्र अधिक पारम्परिक व्यवसायहरुलाई समर्पित छ। विज्ञापनको उत्पादनको बारेमा र यो तथ्य हो कि निरन्तर राष्ट्रिय बजारमा सबै भन्दा एकीकृत भएका कम्पनीहरूलाई दण्ड दिइयो। उदाहरण को लागी, को विशिष्ट मामला मा एट्रेसमेडिया र मेडियासेट.
जे भए पनि, नेटफ्लिक्स विकल्पहरू मध्ये एक हो जुन लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको अर्को लगानी पोर्टफोलियो एकीकृत गर्न विचार गर्नुपर्छ। यद्यपि अहिले सम्मको प्रदर्शनसँग सायद होईन, जुन यसले it०% भन्दा माथि तह पार गरिसकेको छ। एट्लान्टिकको अर्कोपट्टि इक्विटीहरूमध्ये एक उच्च र धेरै प्रयोगकर्ताहरूको आश्चर्यको लागि।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » के नेटफ्लिक्स विश्लेषकहरूले हामीलाई बताए जस्तो राम्रो मूल्य हो?
फेड र ECB को तरलता स्टक बजार मा आशावादी को बाटो खोल्छ